Tapitra ny fe-potoana hanaiky ny fepetran'ny WhatsApp. Te-hanohy hampiasa ity fampiharana ity ve ianao? | Vaovao IPhone
Tapitra ny fe-potoana hanaiky ny fepetran'ny WhatsApp. Te-hanohy hampiasa ity fampiharana ity ve ianao?
Tena akaiky hanatratra ny asabotsy 15 may isika andro lehibe ho an'ity fampiharana ity. Ary ity daty ity dia voamariky ny tetiandro ho an'ny mpampiasa an-tapitrisany ny fampiharana fandefasan-kafatra WhatsApp raha te-hanohy hampiasa azy io satria io no andro farany avelan'ny mpampiasa hanaiky sy hanaiky ny fepetra sy fehin-kevitra navoakan'ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza.
Ny vaovao nozarainay tamin'ny volana Janoary lasa teo ary tapaka fa hanitatra ny fe-potoana hanaovana sonia ireo fepetra sy fepetra ireo mandritra ny fotoana maharitra dia efa ho tapitra. Raha te hanohy hampiasa WhatsApp ianao dia tsy maintsy manaiky ny fepetra napetraka, raha tsy izany dia tsy ho azonao ampiasaina ilay rindranasa.
Raha tsy manaiky ianao dia tsy ho afaka hiditra amin'ny kaontinao na hampiasa ilay fampiharana
Mpampiasa maro izahay izay nametra-pialana hanaiky ireo fepetra ireo ary ny vokany dia mety hahafaty amin'ny resaka fandidiana ary izany no izy raha tsy ekenao izy ireo Tsy ho afaka hiditra amin'ny kaontinao ianao na hampiasa ilay fampiharana fandefasan-kafatra.
Ny vaovao dia sarotra nefa tena izy ary izany raha tsy ekenao ireo fepetra apetraky ny fampiharana eo am-pelatanan'ny Facebook ireo, Amin'ny voalohany, raha afaka manohy mandray fampandrenesana amin'ny fitaovanao ianao ary afaka misintona data vitsivitsy aza avy amin'ny fampiharana mandra-manapa-kevitra ny WhatsApp fa tsy afaka manao azy intsony ianao ary amin'izany andro izany dia ho very ny zavatra rehetra tsy alainao.
Amin'izany rehetra izany dia mila manampy zava-misy lehibe isika ary izany dia ao amin'ny firenentsika, Espana, izay tafiditra ao amin'ny Vondrona eropeana, dia voarakitra amin'ny lalàna mifehy ny fiarovana izahay izay tokony hisakana ny Facebook tsy hahazo ny angona avy amin'ny fampiharana WhatsApp. Tsy mitranga izany any amin'ny firenena maro hafa izay tsy nametraka ity Data Protection Regulation ity ary ho hitan'izy ireo ny fomba fandefasan'ny angon-drakitra azy rehetra avy amin'ny fampiharana hafatra mankany amin'ny tambajotra sosialy nefa tsy misy olona afaka misoroka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » App store » Tapitra ny fe-potoana hanaiky ny fepetran'ny WhatsApp. Te-hanohy hampiasa ity fampiharana ity ve ianao?
Washington Post: Tsy ampy ny fepetra fanoherana ny AirTag fanoherana
Twitter izao dia mamela ny topi-maso sary lehibe kokoa amin'ny fizotry ny fotoana